ကချင်အမျိုးသမီးငယ် Miss World ပြိုင်ပွဲအတွက် စင်ကာပူကိုယ်စားပြုရန်ရွေးချယ်ခံရခြင်း
မိဘနှစ်ပါးစလုံး ကချင်လူမျိုးဖြစ်ပြီး၊ သူမကိုယ်တိုင်လည်း ကချင်စကားနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို မြတ်နိုးသူ၊ မြန်မာပြည်ဘွယ်း ကချင်အလှမယ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူ ဆေးမှုးဘဝနဲ့ ဗန်းမော်၊ မြစ်ကြီးနား စတဲ့ဒေသတွေမှာ အစိုးရဝန်ထမ်းနှစ်ပေါင်းများစွာ အတူသွားလာနေထိုင်ခဲ့ပြီး မိဘများနဲ့အတူ စင်ကာပူကိုအခြေချတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အလှမယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Charity Lu.Lu Seng ပါ မိခင်ကသူနာပြု ဖြစ်ပြီး မိခင်အမေဟာလည်း သူနာပြု အငြိမ်းစားပါ Mdy မှာနေတယိ၊ ။ဖခင်ကတော့ 88မှာဝန်ထမ်းဘဝက နားပြီး စင်ကကိုာပူကို ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပါတယ် ကချင်ပြည်နယ် နမ်မတီးမြို့ ဇာတိပါ၊ ။
ကမ္ဘာ့အလှမယ် ၂၀၁၅ အတွက် ရွေးချယ်ပွဲလုပ်တဲ့အခါ မြန်မာနိုင်ငံဘွားတစ်ဦးကို ပထမဆုံး စင်ကာပူကိုယ်စားပြု ရွေးချယ်လိုက်လို့ တအံ့တသြဖြစ်သွားကြပါတယ်။
စင်ကာပူရောက် မြန်မာများအတွက် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူဘွယ်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီး ဝမ်းမြောက်နှစ်သိမ့်ဘွယ်ရာကတော့ သူမဟာ ဘုရားကို ချစ်ကြောက်ရိုသေ ကိုးကွယ်သူတစ်ဦးအဖြစ် စင်ကာပူယုဒသန်အသင်းတော်နဲ့ စင်ကာပူကချင်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် ၂ခုကို ကိုယ်စားပြုသူဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်လှပသူ မြန်မာ တစ်ဦးကို Miss World, Singapore အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းကလည်း ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို တကမ္ဘာလုံး စိတ်ဝင်စားမှုရှိနေတဲ့အချိန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အထင်ရှားဆုံးအချိန်မှာ စီးပွားရေးလာပ်မြင်တဲ့ စင်ကာပူ မယ်စကြဝဌာ ရွေးချယ်ကော်မတီက မြန်မာအမျိုးသမီးကို ပထမဆု ပေးလိုက်တာပါ။ လူစိတ်ဝင်စားမှုများစွာ ရရှိစေပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ မွေးဖွားခြင်းမရှိသူတစ်ဦးကို ပထမဆုံး ရွေးချယ်လိုက်တာပါ။ ဒါကြောင် စင်ကာပူမှာမွေးဖွားတဲ့ စင်ကာပူနိုင်သားများ မပျော်မရွှင် ဖြစ်နေကြပါတယ်။မယ်စကြာဝဌာပြိုင်ပွဲမှာ ဆုတခုခု ရဖို့ အမျာကြီး လေ့ကျင့်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်အတူပါရှိပြီး ဘုရားကောင်းကြီး ဆက်လက်ခံစားရပ်စေ။
This is the first ever winning ofaSingaporean who is born outside of Singapore for this “Miss World Singapore 2015” contest. Her parents were from Kachin tribe from Northern part of Myanmar. In Myanmar, Kachin people are well known for sitting on the land of Jade and rubies and many are wealthy business owners by trading in jewellery business. Majority of the Kachin are Christians. Also, most Kachin girls are beautiful and some are famous and popular in modelling and acting careers in Myanmar.